Unxantathu Wokubhuloga: Izinto ezintathu Zempumelelo | Martech Zone
NgoLwesine, ngoMashi 8, 2007 NgoLwesibili, Okthoba 4, 2011 Douglas Karr
Bengilokhu ngisebenza isethulo sami ku-Blogging Corporate kuleli viki. I- ingxoxo yencwadi namuhla maqondana nabomdabu base-Digital empeleni kwavusa intshiseko yami nemicabango yami ngokuthi ingqikithi yami kufanele ibe yini. Yize ngizoxoxa ngobuhle nobubi be-Corporate Blogging, engikulindele ukuthi abantu abaningi lapho bazofuna ukubhuloga. Angifuni ukukhuluma ngakho nganoma iyiphi indlela, ngakho-ke ngithanda ukuvusa umdlandla wabo. I ukwethula Triangle ukubhuloga: 3 Elements of Ukubhuloga Ngempumelelo.
Yize ubuchwepheshe buyindlela emaphakathi, njengoba isikhathi sihamba ngokubhuloga amapulatifomu ayaqiniswa nobuchwepheshe obuyisisekelo. Ngicabanga ukuthi izinto zebhulogi ephumelelayo zimi kanje:
Okuqukethwe - lesi yisisekelo lapho ibhulogi yakho yakhelwe khona. Izingxoxo ezingaguquguquki, ezisobala, ezivulekile nezicabangayo ngezihloko ofisa ukuzihlanganisa.
passion - Ngikholelwa ukuthi uthando luyathathelana. Uma ungathandi ibhulogi yakho, noma ngokubhala imininingwane yakho, abafundi bakho bazobona ngawe bese beshiya… ngokushesha.
Momentum - ibhulogi ayikhuli ngokufaka okukodwa. Kudinga umfutho ukuhlangabezana nokudlula okulindelwe abafundi bakho nokuheha abafundi abasha.
Uphawu lwelangabi lumele ilangabi ukuthi okuqukethwe kwakho, intshisekelo yakho nomfutho wakho kuzoqubuka! [Ukuvuselelwa] Ilangabi limele ingxoxo eqala ngabafundi bakho ngamazwana nangokubuyela emuva - ukudala ubudlelwano nabafundi bakho nokusabalalisa igama lakho.
Kuningi okuzayo ngalokhu… Ngingathanda ukuzwa imicabango yakho Unxantathu wokubhuloga. Zizwe ukhululekile ukusebenzisa isithombe futhi uxoxe nabafundi bakho futhi. Ngilangazelela impendulo yakho!
Futhi ngenze lo mfanekiso ngedwa nge-Illustrator! I- ibhittbox amathiphu akhokha!
Kulula Kakhulu, uCaveman angakwenza…
Mar 9, 2007 ku-12: 27 AM
Ngingaba nentshisekelo yokuthi uzokuhlukanisa kanjani # 1 - Okuqukethwe.
Futhi lokho okuqukethwe (nokubonisa / ukufometha) kuhumusha kanjani ngokuphakelayo kwe-RSS
Mar 9, 2007 ku-9: 16 AM
Sawubona Steven! Ngokuqinisekile - ukwakhiwa kudlala indima enkulu. Ngibhalile ngalokho kancane kubhulogi kepha ngobuqotho angiyena uchwepheshe kuleyo ndawo njengesiza esinjenge Umklamo Wewebhu Onempilo.
Bekufanele ngabe ngibhale kakhudlwana ngezithameli… kulokhu-ke laba ngabaphathi abasezingeni eliphakeme kanye nochwepheshe abazimele esifundeni okungenzeka bacabanga ngebhulogi yezinkampani.
Mar 9, 2007 ku-1: 19 AM
Ngicabanga ukuthi ngokuqukethwe kufanele ube nolwazi lwesihloko nezinsizakusebenza ukuze uthole ugqozi kukho. Uma uzoqhubeka nokuvumelana okudingekayo, kufanele uhlale unemibono, okungelula.
Ngigcina uhlu lwezinto engingazidingi ukuzenza ngokushesha ngalezo zikhathi lapho ngingeke ngikwazi ukuza nalutho. Kuyasiza impela ukugcina izinto zihamba, noma ngingakubhali phansi okuthunyelwe uqobo. Ukuba nesihloko ongabhala ngaso kuyasiza.
Mar 9, 2007 ku-9: 23 AM
Ngiyavuma futhi ngiyayithanda ithiphu yakho! Imvamisa nginezihloko ezigcinwe kusalungiswa engaziyo ukuthi ngidinga ukubloga okuningi ngazo. Kuyasiza ngomfutho!
Mar 9, 2007 ku-3: 50 AM
Ngakho-ke inhloso ye-blogger ukushaya iphuzu lokulinganisa phakathi konxantathu, ngicabanga ukuthi yingakho uzidwebe lezo zakhi kunxantathu kwesokudla?
Mar 9, 2007 ku-9: 19 AM
Yebo yilokho ngempela… ukugxila kulezi zindawo ezintathu okucindezela impumelelo kubhulogi yakho. Enye yezinto ezibalulekile engizama ukudlulela kubantu ukuthi ukubhala ibhulogi akuyona i-2-dimensional. Ukuthola okuqukethwe nentshisekelo akwanele - kunomugqa wesikhathi olandelayo ozodinga ukwakha umfutho kuwo.
Siyabonga ngale mpendulo (kuwo wonke umuntu). Umbono wakho uyasiza!
Mar 9, 2007 ku-9: 52 AM
Thanda isithombe. Uthando # 2 ikakhulukazi - la pasión es MUY contagiosa.
Mar 9, 2007 ku-10: 37 AM
Ngicabanga ukuthi okuqukethwe kuyinto ebaluleke kakhulu. Yonke imininingwane yeminithi oyethula kubantu izokhombisa lokho okwazi ukukwenza. Ukukhetha isihloko esifanele ngesikhathi esifanele kungabonakala kuwusizo.
Mar 9, 2007 ku-11: 00 AM
Ngiyayithanda i-Google Ad-words. Kunxantathu wakho wokucabanga, kuphakamisa:
Paris Hilton > Izithombe, i-Wallpaper, i-Video Gossip, ama-Blogs, i-Fanfare
Kuyathakazelisa… (ie: lol)
Mar 9, 2007 ku-6: 07 PM
Ngivuselele isithombe ukuthola ilangabi libukeka sengathi alilona 'uzipho lwelobster'.
Jul 18, 2007 ku-6: 10 AM
Thanda unxantathu nalokhu okuthunyelwe… kuphefumulelwe okuthunyelwe kwanamuhla.